ARAARSUMMAA mana Kiristaana Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa keessatti – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
ARAARSUMMAA mana Kiristaana Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa keessatti
January 25, 2019 /in Lallaba /by EOTC Afaan Oromo
Araarsummaa ilaalchisee adduuyaa irratti ilaalcha sadi jira.
Namootni tokko tokko “Araarsummaa” wanti jedhamu hin jiru. Eenyumtu eenyuuf hin kadhatu kallattiidhaan gara Waaqayyootti dhihaachuun ni danda’ama.” jedhu.
Tokko tokko immo ‘Araarsummaan’ ni jira. Ni barbaachisas.” jedhanii raawwatanii “Araara kan namaaf kadhatu garuu /Galatni fi ulfinni isumaaf haa ta’uu ti./ Kiristoosi dha” nuun jedhu.
Kanneen biroo ammoo “Araarsummaan ni jira.Araarsummaan gahee uummamtootaa ti malee gahee UUMAA ykn gahee WAAQAYYOO miti. Amantaan fi barsiifatni Ortodoksi tawaahidoo illee as keessatti ramadama.
Amantiin pirooteestaantii waa’ee ‘Araarsummaa’ kan qulqullootaa haala armaan gadiitiin barsiisa.
Wanti ‘QULQULLUU’ jedhamu hin jiru.Hundi keenya /amantootni hundumtuu/ qulqulloota dha.
Araarsummaan raawwatame kan jedhamu fooniin yeroo biyya lafaa irra jirru waliif yoo kadhanne hojii irra oola. Yaada kana qophaa isaa yoo laalle, yaada isa duraa wajjiin wal- faallessa “Hundi keenya Qulqulloota erga taane, inni tokko isa kaanif araara kadhachuun isaa maalif barbaachise?” gaaffii jedhu kaasisa.
“Du’a fooniitiin dura malee du’a fooniitiin booda namni araara namaaf kadhachuu danda’u hin jiru.” kan jedhu dha.
Araarsummaan maal inni?
Araarsummaan sirnoota kadhannaa mana kiristaanaa keessatti raawwataman keessaa isa tokko.Manni kiristaanaa kadhannaa galateeffannaa, kadhannaa “Araarsummaa’ fi Waaqayyoo irraa waan rakkanne kadhachuu fi k.k.f. ni qabdi.Kunis dubbisuun fi yeedaloodhaan raawwatama.
“Gooftaan dhihoo dha.Waan hundumaan kadhannaan fi araara araarsummaadhaan akkasumas galateeffannaadhaan kadhaa keessan Waaqayyoo biratti beeksisaa malee gonkumaa hin dhiphatinaa.” Jedha.(Fil 4፥6) “Manni kiristaanaa araarsituu dha. Sababa kanaaf manni kiristaanaan ‘Kadhannaa Araarsummaa’ /ጸሎተ አስተብቍዖ/ ni qabdi. Fakkeenyaaf “Waaqayyoon beekumsa fi Isa sodaachuu akka isaaniif kennuuf waa’ee qondaaltota fi w aa’ee warroota aangoo irra jiran si kadhanna.”/Sirna qiddaasee/ Kun ammo waan akka laayyootti raawwatamu odoo hin ta’in waan ragaa fi bu’uura Kitaaba Qulqulluu fi dhugaa qabu dha. Phaawuloos qulqullichi “Egaa, Waaqayyoo fakkachuudhaan fi tasgabbiidhaan Cal lisnee fi tasgabboofnee akka jiraannuuf kadhannaa fi Araarsummaa kadhachuun galateeffannaas namoota hundaaf mootiiwwaniif fi qondaaltotaaf akka raawwatamaniif (taasifamaniif) hundaan dura ni gorsina.” (Xim (1 ffaa ) 2፥1)
Kiristaanni tokko ofii isaatiif ni kadhata, ni galateeffatas. Akkasumas ofi irraa darbee namoota biroof illee araara ni kadhata; ni galateeffatas. Araarsummaa fi kadhannaan dhuunfaa bifa addan qoodamanii kan ilaallamanii dha. Haa ta’u malee lachuu kadhannaa dha.Lamaanuu qaama kadhannaa ta’uu isaaniitiin akkuma saantima fuula lamaatti haa ta’an malee, manni kiristaanaan keenya garuu kadhaa fi araarsummaa odoo wal-keessa hin makin adeemsisti.
Kanaafuu araarsummaa jechuun walitti araarsuu, dhiheessuu, akka waliif galan taasisuu, dhiifama akka argatan taasisuu jechuudha.
2. Araarsummaan gahee (hojii) eenyuu ti?
Araarsummaan gahee (hojii) uummamtootaa qofa dha. Haala kamiin illee haa laallu! Goukumaa gadhee (hojii) Waaqaa ykn Uumaa ta’uu hin danda’u.Uummamtota keessaas uummamtoota lamatu waan kana raawwatu.Isaanis፦ warri Waaqayyoon kabajee isaan uume ‘Ergamoota waaqaati fi ilma namaa keessaa immoo warroota qab-suura adda addaa keessa dabran arjummaa Isaatiin warra jaallatamtoota isaa ta’an fi warroota kennaa waaqayyoo argatan fi qulqulloota ta’anii dha. Isaan kana keessaa haadha Waaqayyoo Qulqullittii Qulqullootaa kan taate Giiftii Keenya Dubroo Maariyaami gahee harka caalu qabdi. Araarsummaan hojii (gahee) cubbamtootaa miti. Namni cubbamaan cubbuu isaa of irraa haqsiisuuf caaraaquutu irraa eeggama malee “kana irraa darbee deema” jedha taanaan “kan ishii gubachaa odoo jiru kan ormaa kokorsiti” jechisiisa. Laphee cubbamtootaa keessaa cubbuu malee eebbi / በረከት/ bahuu hin dandau.”Jedha waanta’eef kitaabni.(Saam. (1ffaa) 24፥13)
Araarsummaan bakka meeqatti qoodama?
Araarsummaan bakka lamatti ramadama. Tokkoffaan, biyya lafaa kana irratti odoo jiraatan kan raawwatamu oggaa ta’u, inni lammaffaan immoo erga jiruu biyya lafaa kana irraa boqatan booda kan raawwatamu dha.
Araarsummaan Kitaaba Qulqulluu bu’uura godhachuun akka barsiifannaa mana Kiristaana keenyatti kallattiiwwan gurguddoo sadiin adeemsifama.
A, Namni cubbamaan, fedhataan Araarsummaa Kabaja qulqullootaatiin fi Miiltoowwan Waaqaa ta’uu isaaniitiin (kennaa Araarsummaatti) kennaa Waaqa Qulullootaa kan ta’e Waaqayyo guddaadhaan amanu, barbaadee fi fedhee qaama Araara isaaf kadhatu bira dhaqee, maqaa araarsaa sana kabajaan waamaa yeroo gaafatu kan raawwatamuu dha. kanaafillee fakkeenya gaarii kan ta’u seenaa Eelsaa raajiichaati Moot. (2ffaa) 2፥1-16
“…. Uffata Eeliyaas harkaa fudhate san fuudhatee deebi’ee qarara galaana Yoordaanoositti dhaabbate.Uffata harka eeliyaas irraa fuudhe saniin galaanicha dhahee raawwatee “Waaqayyoon, Waaqni Eeliyaas garam jira?” jedhe.Bishaanicha illee oggaa dhahu, bishaanichi gamaa fi gamanaan addaan baname.Eelsaan illee ni ce’e.” Kana bu’uura godhannee;
“Waaqa Qulqullootaa” jechaa kadhanna.
Gara Waaqa keenyatti akka nuuf kadhatan Qulqulloota of duraa aansina.
Gidiraawwaan, rakkoo fi qormaata nuful-duratti danqaraman hunda maqaa isaanii waamaa gara Waaqayyootti oggaa kadhannu nufuul-duraa dhabama.
“Iyyoosaafxi, raajicha Waaqayyoo; isa maqaa isaatiin Waaqayyoo gaafannu asitti hin argamuu? Jedhe hojjettoota keessaa tokko Eeliyaasiif bishaan buusuun kan tajaajilu fi tajaajiltoota isaa keessa isa tokko kan ta’e. “Ilmi saafaaxi Eelsaan as jira” jedhe. (2Moot.3፥11) Mootichi ofuma isaatii Waaqayyoo gaafachuu ni danda’a ture, garuu kana gochuu dhiisee of gad-qabuudhaan dhihaateera. Kunis kabaja inni qulqullootaaf qabu agarsiisuufi.Eelsaan illee Waaqayyoo kallattiidhaan waamee “Bishaan (galaana) kana addaan naaf saaqi.”Jechuu danda’a ture.Garuu kabaja fi qulqullummaa abbaa isaa, barsiisaa isaa sirritti waan beekuuf of gad-qabe, Eeliyaas immoo ol-qabee kabajee argamuu isaatiin wanti inni gaafate sun guuttameef jira.
B, Qulqullichi, kennaan Araarsummaa itti kenname sun gaaffii araarsummaa cubbamichi odoo hin gaafatin qulqullichi fedhiidhuma isaatiin kan dhiheessuu dha. Adeemsa araarsummaa isa 2ffaa kana sirritti kan nuuf ibsu, seenaa muusee isa isa S.Bahuu 32፥1‐32 irratti argamu, isa tokkoo dha. Uummatni Israa’eel waaqa tolfamaa waaqeffachuu isaaniitiin Waaqayyoon akka isaan hin balleessineef Dureen raajotaa Muuseen Waaqayyoo ful- dura ni dhabbate. Hanga Israa’eelotni “Waaqayyoo nuuf kadhadhu!” jedhanitti illee hin eegne. “Yaa Waaqayyo dheekkamsi uummata kee isa humna guddaanii fi harka cimaan biyya Misir keessaa baafte irratti maaliif hammaata?…Balaa keerraa deebi’i. Hammeenya uummata kee irrattis garaa laafi.“Sanyii keessan akka urjiiwwan samii fi cirracha galaanaatti nan baay’isa, lafa waadaa isiniif gale kana illee isiniif laadha.Bara baraaf illee ni dhaalu.”Jedhuun gabroota maqaa keetiin kakatteef san Abrihaam, Yisihiaaq fi israa’eel yaadi.”
Raajichi muusee kadhannaa kana oggaa xummuru maaltu ta’e jennee odoo gaafanne, “Waaqayyoonis balaa uummata Israa’eel irratti buusuuf yaadee ture san ni dhiise.Garaa ni laafe.” jedha Kitaabni Qulqulluu. Dubartiin kana’anii daa imni ishii jalaa dhibamte ,araara gaafachuuf /kadhachuuf/ gara Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiriastoos odoo dhuftu fi kadhattu, duuka buutootni Gooftaa keenyaan (… Nu duuba iyyaa jirti waan ta’eef geggeessin.)jechuudhaan gaafataniiru. Duuka buutotni kana kan raawwatan “Gara Gooftaa keenyaatti naaf kadhaa”. Waan isaaniin jetteef odoo hin ta’in, kennaa araarsummaa isaaniif laatameen dha. /Mat 15፥21‐28). Nutis duuba isaanitti (duuka buutotaatti) yoo iyyine /kadhanna/akkuma kana nuuf raawwatu.
Seenaa fakkeenya muka balasii tiin walbira qabamee kaafame fi eegumsa cubbamtootaa ifa baasee kan agarsiisu illee isuma kana nuuf addeessa. Cubbamaan tokko gumaa (firii) buusuu dhabuun (qabaachuu dhabuun) isaa isaaf beekkamuu dhabaatu illee ergamoota isa eeganiif fi qulqullootaaf kan beekkamu ta’uu isaatiin,qulqullootni fi ergamootni isa eegan isaaf kadhatu.Akkas jechaa. “Yaa Gooftaa naannawaa ishii shuqunaa koosii /xaa’oo/ hanga goonuuf waggaa kanaaf dhiisiin. (Luuq 13፥10) Isa kana kan beekan Waaqayyoo fi Qulqulloota isaati malee mukattiin hin beektu.
C, Waaqayyoon qaama Araarsummaa gaafatu fi gaafachiisu giddutti seenee yeroo ajaju kan raawwatamu dha. Waaqayyoo mataa Isaa nama Isa kadhate kallattiidhaan isa fayyisuu odoo danda’u, “Abaluun sii haa kadhatu.” maaliif jedha? Cubbamtoota gara namootaatti maaf erga? Yoo jenne, tajaajiltoota isaa waan ta’aniif kabaja isaan qaban ibsuuf qofa dha. Akkasumas Inni (Waaqayyoon) kallattii baay’een nama fayyisuu akka danda’u nu hubachisuu fi Dandeettin isaa kunis bu’aa arjummaa Isaa akka ta’e nuuf beeksisuu barbaadee ti. Isa k anaaf immoo fakkeenya gaarii kan nuuf ta’u seenaa Abrihaamii dha.
Mootii Geraaraa kan ture Abemeleek haadha manaa Abrihaami kan taate Saaraa wajjiin fedhii foonii isaa guuttachuuf, kabaja ishii salphisuuf barbaadee ture. Waaqayyoon garuu cubbamaan kamiyyuu cubbuu isaa irraa akka deebi’uufi malee akka badu hin barbaadu waan ta’eef “Haadha manaa namichaa deebisi. Inni raajaa dha waan ta’eef kadhannaa siif raawwata, ni fayyitas.“ jechuudhaan gar-laafeenya Waaqayyoo oggaa ibsuu fi gara qulqullootaatti oggaa akeeku (qajeelchu) laalleerra Kitaaba Qulqulluu keessatti. (S.Uum.20፥1‐18)
Araarsummaa du’a fooniitiin booda jiru
Warrota “Araarsummaa du’a fooniitiin dura jiru ni amanna.Isa du’a fooniitiin booda jiru garuu hin amannu.”Jedhaniif Kitaabni Qulqulluu deebii itti aanu qopheesseefi jira.Araarsummaa du’a fooniitiin booda jiru ilaalchisee akkas jedha kitaabni qulqulluu.
Lubbuun, uummamtuu Waaqayyoo irraa namaaf kennamte fi yaaduu, dubbachuu fi jiraachuu kan nu dandeessistu fi booda irratti gara Waaqayyootti kan deebitu dha. (S.Uummamaa 2፥7, Makbib 12፥7) Kanaafuu qulqullootni sababni isaan waan hunda beekaniif, du’a fooniitiin booda jiraattota sababni isaan ta’aniif ,sababni isaan nudubbisaniif fi kan isaan dubbisnu lubbuu tanaani. Galatni fi Ulfinni Isumaaf haa ta’uutii Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos illee “ An Waaqa jiraattotaati malee Waaqa du’ootaa. “ sababni jedheef illee kana. (Maat 22፥32)
Qulqullootni gara Waaqayyoo deeman erga isaan jiruu adduunyaa kana irraa boqatan booda waan adduunyaa kana irra raawwatamu hanguma Waaqayyoon isaaniif ibseen beekuu akka danda’anii fi Araara akka nuuf kadhatan Kitaabni Qulqulluu nuuf ibsa.Fakkeenya armaan gadii haa laallu.
A, Dhaloota Kiristoosiin dura waggoota 1500 dursee du’a fooniitiin kan boqate Muuseeni fi fooniifi lubbuun isaa odoo gargar hin bahin gara samiitti kan ol bahe Eelyaas lachuu yeroo Gooftaan foon uffatee dhufe san tulluu Taaboor irratti mul’atanii jiru ‘Kadhannaa oggaa geessu (Gooftaan keenya) bifni fuula isaa ni jijjiirrame uffatni Isaas adii ta’e; akka bakakkaattis ni ife. Namootni lama dhufanii isa wajjiin haasa’aa turan.Isaanis Muusee fi Eeliyaas turan.“Kabajaan mul’atanii waan Iyyaruusaaleem keessa uummamuuf jedhu waa’ee bahuu isaas haasa’aa turan. (Luuq 9 ፥29‐31)
B, Wareegamtootni du’a foonii erga du’an booda, lubbuu foon uffattee hin jirre saniin waan adduunyaa kana irra raawwatamaa jiru akka beekan fi Araarsummaa akka nuuf raawwatan mul’atni Yohaannis akka nuuf ibsutti haala armaan gadiitti ibsameen taa’a. ”Hidhaa isa shanaffaa oggaa hiiku, lubbuu namootaa warra sagalee Waaqayyoof fi wareegamummaa kan isaan eegan saniif qalaman siida aarsa isaa jalattan arge. Sagalee ol-ka’aatiinis iyyaa “Yaa Gooftaa dhugaa fi qulqulluu, hanga yoomitti harka kee murtii irraa qabda?Haaloo dhiiga keenyaas hanga yoomitti warroota lafa irra jiraachaa jiran irratti baasuu dhiista?” jedhan.Hunda isaaniif uffanni adii itti kenname. Warroota akkuma isaan ajjeefaman saniin ajjeeffamuu qaban, gabrootni michuuwwani fi obboolootni lakkoofsi isaanii hanga xummuramutti waggoota muraasaaf akka boqatan jedhameef .” (Mul .Yooh.6፥9‐11)
C. Barnoota Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos barsise keessaa isa tokko kan ta’e seenaan Abrihaam, Nawee /dureessichi/ fi Al’aazaar du’a fooniitiin booda illee Araarsummaa fi kadhaan akka jiru kan nuuf hubachiisu dha. (Luuq. 16፥19‐31)
D, Pheexiroos qulqullichi erga inni du’ee booda amantootaaf akka kadhatu ibsuun isaa ragaa dabalataa dha. “Akkuma Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos natti agarsiisetti, jiruu kiyya isa biyya lafaa kana irraa akkan dafee gargar (addaan) bahu nan beeka. Wantoota kana yeroo hunda yaaduu akka dandeessaniif nan tattaaffadha. (2ffaa Phex. 1፥13‐15)
Warrootni fooniin du’anii lubbuun jiraattota ta’an warroota fooniin jiraattota ta’aniif ni a raarsu. Warrootni fooniin hin dune warra fooniin du’anii lubbuun jiraattota ta’aniin “Nu araarsaa!” jechaa ni kadhatu. “Ji’oota sanitttis kadhannaan jaallatamtootni koo qulqullootni kadhannaan isaanii gara waaqaatti ol bahe. Warri adduunyaa kana irraa dabaan ajjeefaman dhiigni isaanii waaqa ergamtootaa duratti ni jaallatame. Ji’oota kana keessa qulqullootni samiitti jiraatan sagalee tokkoon ta’anii wal-ta’anii ni galateeffatu. Ilma namaaf illee dhugumaan ni kadhatu. Uumaa isaanii ni galateeffatu.” (Heenok 12፥33). Warri fooniin du’an warra fooniin hin duuneef, akkasumas warri fooniin hin dune warra fooniin du’aniif ni kadhatu jechuun kanuma.
Waaqayyoon Kadhaa fi Araarsummaa Qulqullootaatiin nu haa eegu.
M/K/O/Tawaahidoo Itiyoophiyaatti Qindeessaa fi Qajeelchaa Manneen Barnoota Sambataa
Qindeessaa Barnootaa Wangeelaa fi Tajaajila Duuka bu’ummaatti Kutaa ijoo Babal’iinsa Lallaba Wangeelaatiin qophaa’e.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2019-01-25 12:34:232019-01-25 13:06:20ARAARSUMMAA mana Kiristaana Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa keessatti
Baga Ayyaana Cuuphaaf nagaan isiniin gahe. Koottaa wal ceephanna (ISAY. 1:18)